Maxaad ka Heli Doontaa Kulammada Markhaatiyaasha Yehowah?
Maxaad ka Heli Doontaa Kulammadeenna?
Kulammada diiniga ah dad badan baa aadistooda iska dhaafay waayo qalbi qaboojis iyo tilmaanta Ilaahay bay ka waayeen. Haddaba dee maxaa loo aadaa kulammada Markhaatiyaasha Yehowah? Maxaad meeshaas ka heli doontaa?
Farxadda ka timaada la jooga dad jacayl badan oo dadka daneeyo. Kirishtaankii u horreeyay kiniisado bay ku abaabulnayeen. Waxay qaban jireen kulammo lagu caabudo Ilaahay oo lagu dhigto Qorniinka Quduuska ah wayna isdhiirrigelin jireen. (Cibraaniyada 10:24, 25) Waxay ku ururi jireen meel jawi fiican oo markay walaalaha Kirishtaanka ah la joogeen waxay dareemi jireen inay la joogaan saaxiibbo run ah. (2 Tesaloniika 1:3; 3 Yooxanaa 14) Habkaas ayaan maanta raacnaa oo waxaan dareennaa farxad la mid ah.
Faaʼiidada ka timaada markaan baranno sida nolosheenna loogu isticmaalo tacliimaha Kitaabka. Ragga, dumarka iyo carruurtaba way isku wada yimaadaan sidii xilliyadii Kitaabka la sameyn jiray. Macallimiin aqoon leh baa ina fahamsiiya sidaan tacliimaha Kitaabka nolosheenna ugu isticmaalno. (Sharciga Kunoqoshadiisa 31:12; Nexemyaah 8:8) Qof walba wuu ka qaybqaadan karaa wadahadalka iyo heesaha taasoo ina siisa fursad aan ku muujino rajadeenna.—Cibraaniyada 10:23.
Barakada ka timaada iimaankaagii oo adkaaday. Rasuulkii Bawlos ayaa kiniisadihii hore mid ka mid ah ku yiri: “Aad baan u doonayaa inaan idin arko . . . inaan idinkula dhiirranaado rumaysadka, kiinna iyo kaygaba.” (Rooma 1:11, 12) Iimaankeenna iyo goʼaanka aan gaarnay inaan xajino tacliimaha Kitaabka waxaa xoojiya xiriirka fiican aan walaalaheenna kula leenahay kulammada.
Kulankeenna soo socda ma imaatid sidaad u aragtid waxyaalahan? Si fiican baa lagu soo dhoweyn doonaa. Kulan kasta waa bilaash marnaba lacag lama ururiyo.
Habkee bay kulammadeenna raacaan?
Sidee baan u faaʼiidaysannaa markaan tagno kulammada?
Haddii ad rabtid inaad aragtid gudaha Hoolka Boqortooyada intaadan aadin kulammada ka codso mid ka mid ah Markhaatiyaasha Yehowah inuu ku geeyo.
Ad Kulammada Markhaatiyaasha Yehowah
Ogow meeshaan ku kulanno iyo sidaan Ilaahay u caabudno. Dadkoo dhan ayaa iman karo lacagna lama ururiyo.
Wadaag Wadaag Maxaad ka Heli Doontaa Kulammadeenna?